၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို စံပြဖြစ်အောင်ကျင်းပမည်ဟုဆို - Yangon Media Group
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို စံပြဖြစ်အောင်ကျင်းပမည်ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၃ – ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကို ဟန်ပြမဟုတ်ဘဲ စံပြဖြစ်အောင်ကျင်းပမည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဩဂုတ် ၂၃ရက် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးတွင်ကျင်းပသည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက် ပွဲကျင်းပနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ゞင်းက အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
]]ဒီမိုကရေစီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲက ခေါင်းနဲ့ပန်းပဲ။ ဒီမိုကရေစီရှိရင် ရွေးကောက်ပွဲရှိကိုရှိရမယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အများယုံကြည် လေးစားလက်ခံတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးက သမာသမတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ အလကား ဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နေမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဟန်ပြရွေးကောက် ပွဲမဟုတ်ဘူး။ စံပြရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်ဆော င်ရွက်မှာ}}ဟု ゞင်းက ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုထူနိုင်အောင်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ပြီး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းများကို သမာသမတ်ကျကျဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကာ ပြည်တွင်းပြည်ပစောင့်ကြည့်အဖွဲ့များကိုလည်း ဖိတ် ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးလှသိန်းက ဆိုသည်။
]]ရွေးကောက်ပွဲကလည်း အများယုံကြည်လက်ခံမှ အောင်မြင် မယ်ဆိုတာ ခံယူထားပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့က အောင်မြင်အောင်တော့ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ် ထားပြီးသားပါ}}ဟု ゞင်းက ဆိုသည်။
ယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲကို နိုင်ငံရေးပါတီ ၈၈ ပါတီကို ဖိတ်ကြား ခဲ့ပြီး ပါတီ ၈၄ ပါတီတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ゞင်းက ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ ပြည်သူများက ပြည်သူများကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးချယ်ကာအစိုးရဖွဲ့၍ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ် ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲသည် စံနှုန်းနှင့်အညီဖြစ်ရန် လိုအပ်ပြီး ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးလှသိန်းက ဆိုသည်။
ဟားခါးမြို့သစ်စီမံကိန်း၌ မြေကွက် ၇၀ဝ ကျော် ဖော်ထုတ် ရောင်းချပေးနေ
လက်မှတ်မဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမနှစ်သောင်းခွဲကျော်ကို စာပေးစာယူသင်တန်းပေးမည်
ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်တွင် စတင်ဆွေးနွေး၊ ဥပဒေ စံချိန်စံညွှန်း၊ ဒီမိုကရေစီ စံချိန?
ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင်သည် ရဲမှူးချုပ် တင်ကိုကိုအပေါ် အာဃာတ ရှိနေနိုင်သည့်အတွက် ကွဲလွဲသည့် ထ??
မသန်စွမ်းသူများအား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိစေရေး တိုက်တွန်းကြောင်းအဆို အတည်ပြုရာသို့
ဒါဘီသို့ အပြောင်းအရွှေ့ကြောင့် လမ်းပတ်နှင့် အက်ရ်ှလေကိုးလ် ပြန်ဆုံတွေ့
ကယ်လီဖိုးနီးယား တောမီးသင့်သူများကို အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဆက်လက် ရှာဖွေ၊ သေဆုံးသူ ၅၆ ဦ??